चिनिया सेना द्वारा २० भारतीय सैनिक मारी दिएपछि परिवारमा रुवाबासी – Sandesh Munch
चिनिया सेना द्वारा २० भारतीय सैनिक मारी दिएपछि परिवारमा रुवाबासी
June 17, 2020 418
सोमबार राती भारत–र चीनको सीमा क्षेत्रमा २ देशका सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भयो । यो झडपमा दुवैतर्फका सैनिक ठूलो संख्यामा हताहत भए । भारतीय सेनाले बिहारको सारण जिल्लाका जवान सुलील कुमार ‘शहीद’ भएको खबर उनको परिवारलाई दियो । मंगलबार बेलुकी यो खबर पाएसँगै पूरै परिवार शोकाकुल बन्यो । पूरै रात शोकमा बित्यो तर, बुधबार बिहानै ‘शहीद’ भनिएका सुनिल कुमारकी पत्नीको फोन बज्यो ।
खासमा सुनिलको ठाउँमा अर्कै जवानको मृत्यु भएको थियो तर ज्यान गुमाउने अर्का जवानको नाम पनि सुनिल कुमार नै थियो । ज्यान गुमाउने जवानको नाम सुनिल कुमार राय थियो र उनका पिताको नाम सुखदेव राय थियो । संयोगले सारणका जवानको नाम पनि सुनिल कुमार राय थियो र उनका पिताको नाम पनि सुखदेव राय नै थियो । यही कारण अधिकारहिरु झुक्किएको पाइएको छ ।स्रोत : डिसी नेपाल
Prevकुलमानको चमत्कार बिधुत महशुल दर ह्वात्तै घट्यो
Nextकोरोनाबाट बस व्यवसायीको मृत्यु
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित हेर्नुहोस्…